Myanmar Warso Font for Android Free Download - 9Apps
Tools | 3.0MB | Update: 2019-06-04 | Version: 1.0 | Requires: Android2.0 or later
Thousands of top best android apps on 9Apps! 20,000+ users downloaded Myanmar Warso Font latest version on 9Apps for free every week! You get various free apps from the store. This hot app was released on 2017-07-08. Remember it’s the app with great joy!
"Myanmar Warso Font" Root မလိုထည့်သွင်း မြန်မာစာလုံးအလှတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Myanmar Warso ဆိုတဲ့စာလုံးအလန်းလေးတစ်ခုပါ။
Samsung, Huawei, Vivo, Oppo, Xiaom(MIUI) တို့လိုဖုန်းတွေမှာ
ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့အကုန်အလုပ်ပြီးပါတယ်၊ ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း 2MB တည်းပါပဲ။
MIUI 8 အထက်တွေမှာလည်းလွယ်လွယ်ကူကူ Root မလိုပဲပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
Huawei Android Version 6.0 တွေမှာလည်းလုံးဝအဆင်ပြေအောင်လုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။
Samsung 6.0 အထက်တွေမှာတော့ Root နဲ့မှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi, Vivo မဟုတ်တဲ့အခြားဖုန်းတွေမှာတော့ Root လိုအပ်ပါတယ်။
Root နဲ့သွင်းရင်တော့ Coc, Smule တို့မှာရောမြန်မာစာလုံးဝမှန်သွားပါလိမ့်မယ်။
Samsung တို့လို Browser မှာစာမမှန်တာတွေကိုရော 100% OK သွားပါလိမ့်မယ် ;)
အဆင်မပြေတဲ့ဖုန်းတွေရှိရင်တော့ Comment ပေးခဲ့ကြပါ။
အကုန်လုံး One Click တွေပါပဲ :)
Samsung နဲ့ Oppo ဆို "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး Install လုပ်ပေးပါ။
ပြီးရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး Myanmar Warso(myFont) ကိုရွေးပေးပါ။
မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် Change Font ကိုနှိပ်ပြီး Default ကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။
Vivo ကတော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး "ဖောင့်ပြောင်းမည်(၁)" ကိုနှိပ်ပြီး Theme တွေထဲမှာ
Myanmar Warso Font ကိုရွေးပေးပြီး Apply လုပ်ပေးရုံပါပဲ :D
မရရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်(၂)" ကိုနှိပ်ပြီး Font တွေထဲမှာ Myanmar Warso Font ကိုရွေးပြီး Apply လုပ်ပေးပါ။
မရသေးရင် File Manager ထဲကိုသွားပြီ Vivo Myanmar Font ဆိုတဲ့ဖိုဒါထဲကိုဝင်ပြီး
Warso.itz သို့မဟုတ် Warso.txj ကိုဖွင့်ပြီး Apply လုပ်ပေးပါ။
မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်(၃)" ကိုနှိပ်ပြီး Default ကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။
Huawei ဆိုရင်တော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပါ။
Theme တွေထဲမှာ Myanmar Warso Font ဆိုတဲ့ Theme ကိုရွေးပြီး Apply ပေးလိုက်ပါ။
မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး Default ကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။
Xiaomi ဆိုရင်တော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး System Font သို့မဟုတ် Theme ထဲက Font ထဲမှာ
Myanmar Warso Font ဆိုတဲ့ Font ကိုရွေးပြီး Apply လုပ်ပေးလိုက်ပါ၊။
တကယ်လို့ကိုယ့်ဖုန်းကအပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေမဟုတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် Root ရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်
Other(#Root) ကိုနှိပ်ပြီး Root တောင်းလာရင် Grant သို့ Allow ပေးပြီးလက်ခံပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင် "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး ၅ စက္ကန့်လောက်နေရင်ဖုန်းက Restart ကျသွားပါမယ်။
ပြန်တက်လာရင်တော့ ဘယ်နေရာသွားသွားမြန်မာစာအားလုံး Ok ပါပြီ ;')
မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "မူလအတိုင်းပြန်လည်ထားရှိမည်" ကိုနှိပ်ပြီးပြန်ထားနိုင်ပါတယ် :D
Play Store ကနေဒေါင်းလို့အဆင်မပြေသူများ ဒီမှာသွားဒေါင်းနိုင်ပါတယ် > Download Free at : http://www.takhon.com/tech/?s=Myanmar+Warso+Font
"Myanmar Warso" Font is Beautiful Myanmar Zawgyi Font Style!
you can use in Samung, Oppo, Huawei EMUI Vivo and Xiaomi(MIUI) without ROOT Access! (Some Samsung Over Marshmallow 6.0 Need Root)
supported HUAWEI 6.0 Marshmallow.
supported MIUI 8++ without root!
Other phone requires root permission!
if you have any problem with this app, please contant me.
Big collection of hot android apps for phone and tablet. This top Tools app is just 3.0M. This app also performs well on small phone that are not high standard configuration. 9Apps also provides other hot Tools apps(games) for android mobile phone. Trusted by millions, 9Apps is your perfect choice for android devices.